Gabadh Muslim ah oo loo doortay maamulka sare ee xisbiga Miljöpartiet | Somaliska
Gabadh Muslim ah oo loo doortay maamulka sare ee xisbiga Miljöpartiet
Gabadha lagu magacaabo Sümeyya Gencoglu oo 22 sano jir ah ayaa isbuucii tagay waxaa loo doortay in ay ka mid noqoto madaxda ugu saraysa xisbiga Miljöpartiet (MP). Goloha maamulka xisbiga oo loo yaqaan (partistyrelsen) ayaa masuul ka ah hogaanka xisbiga Miljöpartiet iyadoo ay Sumeyya noqonayso qofkii ugu horeeyay ee Muslim ah ee da’yar ee xilkaasi loo doorto. Sumeyya oo ku nool magaalada Halmstad ayaa waxay siyaasada ku jidhay muddo 5 sano ah.
“Aad ayaa ugu faraxsanahay waana sharaf in la i doortay. Waa mid xiiso badan in aan ka qeyb qaato samaynta siyaasada xisbiga inaga oo ka tirsan xulufada dowlada” ayay Sumeyya u sheegtay telefishinka SVT.
Sumeyya ayaa hada barata cilmiga Bulshada. Waxay sidoo kale gudoomiye u tahay urur lagu magacaabo Muslimiinta u taagan Nabada iyo Cadaalada (Svenska muslimer för fred och rättvisa) qaybtiisa magaalada Halmstad. Waxay sheegtay in ay ka shaqayn doonto arimaha sinaanshaha, socdaalka iyo waxbashada. Iyo in ay ka qeyb galiso siyaasada dhalinyada iyo dadka soo galootiga ah.
Hambalyo ayaan leenahay Sumeyya!
Sweden oo ka hadashay taageeradeeda ku aadan Soomaalia iyo soomaalida oo doonayo in ay dhowr gacmood ku tuugsadaan
haballyo waa arin lagu farxo runtii
June 18, 2015 at 02:15
hanbalyo xayaaka llaah
Asc walalayl waxan rabaa inad arin iga jahil bixisaan suasha dadka laga keeno xeroyika qooxotiga o ay Sweden ay so codsato o UNHCR keeento pasaborka waayn ma 5sano ayeey ku qadaanayan mise sidaa daaadka isaso dibo ayey 8sano ku qaaatan.
Mida kle qofki ku imaado Sweden 17 sano meeeqa sano kdib ayu ku qadaani karaa.